Archive du 20180910
Kitra-CAN 2019 Mahay ny Malagasy
Raha ara-taratasy dia resy tsy miady ny Barea. Laharana voalohany aty Afrika ny Senegaley ary nahavita dingana avo tamin’ny Mondial 2018 tany Rosia farany,
Federalista Toamasina Nanangana ny « Fanjakana Madagasikara Atsinanana »
Namoaka fanambarana ny Vondron’ny Federalista Toamasina izay tarihan’Atoa Be François, fa manomboka izao dia “mijoro eto Madagasikara sy eto Toamasina,
Kandida Arlette Ramaroson Nisy nitoraka « cocktail molotov » ny foiben-toerany
Nahitana irony karazana baomba vita tanana na « cocktail molotov », tavoahangy voasisika fasika sy lasantsy izay mety hitera-doza raha mipoaka irony, teny Ambondrona teo amin’ny vavahadin’ny Foiben-toerana QG (Quartier Général)
Antoko MFM Handray anjara amin’ny fifidianana
Vonona hanosika ny fampandehanana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hotanterahina ny 7 novambra ho avy izao ny antoko MFM Faritanin’Antananarivo, tarihin’ny tompon’andraikitra voalohany ao aminy Atoa Ramaroson Hery.
Zakariasy Patrick “Mila mifidy lalàmpanorenana isika”
Talohan’ny fanjanahantany dia fanjakana maromaro no teto, hoy ny Tangalamena sady mpandinika politika, Zakariasy Patrick.
Fitondran’ny HVM Hitohy hatraiza ny ra mandriaka ?
Vao nandray ny fitondrana i Hery Rajaonarimampianina ny 25 janoary 2014, dia efa ra mandriaka sy aina nafoy no nanamarika azy satria ny takarivan’iny no nisian’ny fipoahan-javatra teny Anosy tsy lavitra an’i Mahamasina,
Kitra- Ligy V7V sy Matsiatra Ambony Tontosa tao anaty fisaratsarahana ny fifidianana
Tontosa teny amin’ny Trano Bongo tamin’ny sabotsy 08 septambra 2018, hoy ny filohan’ny “Commission Electorale FMF”,
Dia miarahaba anao aloha Rakoto Jean nahazo izao toerana ambony indrindra eto amin’ny tany sy ny firenena izao a ! Manao ahoana ny fihetseham-po leaza a ?
Marc Ravalomanana mivady Nankahery ireo tra-doza teny Mahamasina
Niondrika am-panajana teo anatrehan'ny maty vokatry ny fifanosehana tetsy Mahamasina nialoha ny lalao baolina kitra nihaonan’i Madagasikara sy Sénégal ary nampionona ireo fianakaviana teny amin’ny Hopitaly HJRA Ampefiloha i Marc Ravalomanana mivady omaly alahady 9 septambra,
Asa fanaovan-gazety 9 taona ny Tia tanindrazana
9 septambra 2009, 9 septambra 2018. Feno 9 taona omaly alahady ny gazety Tia tanindrazana. Tsy niova ny tigetra fa dia ny : “Sahy mijoro ho an’i Gasikara.”
Adin’akoholahy Izy tompony indray no maty teo an-kianja
Abdalah, mpamily fiara, no nindaosin’ny fahafatesana tampoka, omaly, raha andeha hampiady ny ankohony “Peta-tsanga patte blanche”.
Eklesia Episkopaly Malagasy Toamasina Mpiasam-piangonana 80 nofanin’ny CNaPS
Mpiasam-piangonanana 80 avy amin’ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EMM) Diosezy Toamasina no nahazo fiofanana avy amin’ny CNaPS ny herinandro lasa teo.
Mahamasina Dia ho matimaty foana ve ?
Nampivarahontsana ny nahita an’ireo Malagasy mpiray tanindrazana namoy ny ainy sy ny naratra vokatry ny fifanosehana hiditra ny kianjaben’i Mahamasina
Kianjan’i Mahamasina Efa mba fotoanany ny fanatsarana azy
Tsapa tamin’ny fanatrehana ny lalao baolina kitra nihaonan’ny Barean’i Madagasikara sy ry zareo Senegaley omaly alahady 9 septambra fa efa tsy antonona ny mpitia baolina kitra Malagasy
Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Mirary ny Barea “ho lasa faran’izay avo”
Manoloana ny loza niseho omaly alahady 9 septambra maraina teo Mahamasina izay namoizana ain’olona iray sy naharatrana am-polony maro, dia namoaka fanambarana ny minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.
Samy hibaiko ny azy
Miova ny tantana eto amin’ny firenena taorian’ny nialan’ny filoha teo aloha tamin’ny toerany ny takarivan’ny zoma 7 septambra lasa teo.
BEPC Antananarivo Nitotongana ny fahaizan’ny kandida
Nampikolay ireo mpitsara fanadinana BEPC tamin’ity taona ity ny fihenan’ny lentan’ny fahaizan’ireo kandida raha ho an’ny teto amin’ny fiadidiam-pampianarana eto Antananarivo no lazaina.
Mpikabary katolika Miampy 767 isa
Lanonambe tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny sabotsy teo ho an-dry zareo avy eo anivon’ny fikambanan’ny mpikabary katolika eto Madagasikara na ny Mpikalo satria dia niampy 767 isa ireo mpikabary vaovao navoakan’ny fikambanana.
Vao maraina dia efa nitokona nanoloana ny biraon’izy ireo etsy Ampasampito ireo mpitatitra avy eo anivon’ny kaoperativa Tselatra ny sabotsy teo.
Vidim-bary niakatra Mampikaikaika ny tokantrano maro
Manomboka mimonomonona ny Malagasy ny amin’ny fiakaran’ny vidim-bary amin’izao fotoana izao.
Orinasa Socolait Hanamafy ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiompy
Nanana olana tamin’ny akora fototra nampiasainy teo aloha ny orinasa Socolait ka nanery azy hanafatra vovo-dronono tany ivelany. Efa niravona tanteraka ankehitriny ny olana.
Orinasa Ambatovy Manohana ireo tantsaha mamboly hazo fihinam-boa
Nanampy ireo tantsaha 127 tompony sy mpampiasa ny tany voakasika tamin’ny fametrahana ny fantsomby (pipeline) tapa-kevitra ny hamboly hazo fihinam-boa ny orinasa Ambatovy, mba hahafahan’izy ireo manitatra ny asa fidiram-bolany.
Fanamboarana fotodrafitrasa aty Afrika 60 miliara dolara no nomen’ny Sinoa
Nanambara ny filoham-pirenen’i Sina Xi Jinping fa tsy hitsabaka mihitsy amin’ny raharaha anatin’ny firenena afrikanina ampiany nandritra ny fikaonan-doha lehibe natao tany aminy tamin’ny farany teo.